ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မန်စီ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ (ရုပ်သံ)
မန်စီ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ (ရုပ်သံ)
zinko ko said...
Kio.kia သူပုန်​အဖွဲ့ ရှိ​နေလို့ ကချင်​တိုင်းရင်းသား​တွေ ဒီလို ခံစား​နေရတာပါ..kio သူပုန်​အဖွဲ့ကို တပ်​မ​တော်​ အ​နေဖြင့်​ အခုလို ကြိုးရှည်​ရှည်​ဖြင့်​ လှန်​ထားတဲ့နည်းဗျူဟာကို အသုံးပြု​နေမဲ့အစား ကချင်​လူထု ကိုသက်​ညှာ​ထောက်​ထားပြီး kio သူပုန်​အဖွဲ့ကို အပြုတ်​ တိုက်​သင့်​ပါတယ်​...
fuckပဲ zinko ko KIO KIA မရှိရင် မင်းအဖေ ဗမာတပ်တွေက ထင်တိုင်းကြဲနေမှာပေါ့ ရှိနေတာကိုမှ လူသတ် ရွာမီးရှို့ ဘုရားကျောင်းမီးရှို့ မုဒိန်းကျင့် ဖမ်းချင်တဲ့ကောင်ကိုဖမ်း ရိုက်ချင်တဲ့ကောင်ကို ပုဒ်ထီး ပုဒ်မ ချချင်တာချ ပြောချင်တာပြောပြီး အချိန်မရွေးဝင်ဖမ်းနေတာက ဘာတွေလဲ
မဟုတ်မမှန်တာတွေကိုလဲ မျက်နာမပျက်ပဲ ဝန်ခံရဲတယ်
အဆိုးဆုံးက ဒါတွေအားလုံးကို လိပ်ပြာသန့်သန့် နဲ့လုပ်ရဲတာပါပှဲ
သာမှန် စဉ်းစားတတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုရင်နားလည်မှာပါ တကယ်ဆို ပင်လုံစာချုပ်သာမရှိရင် ကချင်မြေဟာ တိုင်းတစ်ပါးပြည်ပဲ ဗမာစစ်တပ်လာထားတာကိုပဲ သိပ်တရားလွန်နေပြီဆိုတာရောသိလား
မင်းသိဖို့က ကချင်မြေဟာ မင်းတို့ဗမာလိုပြောမှ ပြည်နယ်ဆိုပေမယ့် province မဟုတ်ဘူး ဆိုတာပါပဲ state ပါ
မင်းတို့ဗမာ တွေရဲ့ မြေမဟုတ်ဘူး
ဒါပေမယ့် ဒါမင်းရဲ့ အပြစ်မဟုတ်ဘူး
မင်းသင်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းစာထဲက သမိုင်းအတုရဲ့ အပြစ်ပါ်
Brang... စစ်​တပ်​က ဗမာ စစ်​တပ်​မဟုတ်​ပါဘူး မြန်​မာစစ်​တပ်​ပါ. ကချင်​ ​တွေကို တိုက်​​နေတာမဟုတ်​ပါဘူး သူပုန်​ထ​နေတဲ့ kio kia ကို တိုက်​​နေတာပါ... ပြီး​တော့ ပင်​လုံ စာချုပ်​ မရှိရင်​လဲး ကချင်​ တိုင်​ပြည်​ ဆိုတာ ဘယ်​​တော့မှဖြစ်​မလာပါဘူး... မြန်​မာ့တပ်​မ​တော်​ရှိ​နေတာ မင်းတို့အတွက်​ ဘုရားသခင်​ မစသလိုပါပဲ... ကချင်​​မြေမှာ မြန်​မာ့တပ်​မ​တော်​ မထားခဲ့ရင်​လဲး တရုတ်​က ဒီတိုင်းကြည့်​​နေမှာမဟုတ်​ပါဘူး...မြန်​မာ မပိုင်​ရင်​ တရုတ်​ ပိုင်​မှာပါ ဘယ်​​တော့မှ ကချင်​ နိုင်​ငံဆိုတာ ဖြစ်​မလာပါဘူး....
ကို Brang Wunpawng သို. - - - -
ခင်ဗျားရဲ. ခံစားချက်တွေကို အပြည်.အ၀ နားလည်ပါတယ်။
မကြာခင် ကာလမှာ ကချင်မြေကို အမိ ဖက်ဒရယ် ပြည်
ထောင်စု နိုင်ငံတော် ရဲ. ဒေသ အသီးသီး နဲ.အတူ
လက်ရည်တပြင်တည်း ကချင်တွေဘဲ အုပ်ချုပ်ရတော.မယ်.
ရောက်လာ ဖို.အားလုံးက မျှော်လင်.နေကြတာပါ ။
တိုင်းရင်းသား အားလုံး ကိုယ်.ဒေသ ၊ ကိုယ်.လူမျိုး တွေရဲ.
ကံကြမ္မာ ၊ အနာဂါတ်တွေကို ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးခွင်.၊
အုပ်ချုပ်စီမံခွင်.တွေ ကို ဖက်ဒရယ်မူနဲ. အတူ ရကြတော.မှာပါ ။
အဲဒါဆီရောက်ဖို. လည်းအားလုံး (တစ်စုတစ်စည်းတည်း
မဟုတ်တောင်) နိုင်သလောက် နည်းလမ်းအသွယ်သွယ်နဲ. ကြိုးစားနေကြတယ် ။
လွတ်လပ်မှု ၊ တရားမျှတမှု၊ ငြိမ်းချမ်းမှု ၊ တို. ကို
ခင်ဗျားတို. ကချင်တွေချည်း ၊ တိုင်းရင်းသားတွေချည်း
ကျွန်တော်တို. ဗမာတွေလည်း ရအောင် တိုက်ပွဲဝင်ဆဲ၊
ကချင်အပါအ၀င် တိုင်းရင်းသား နယ်မြေတွေ ကို
လက်ဝါးကြီးအုပ် ၊ သိမ်းပိုက်ထားချင်တာ စစ်အာဏာရှင် တွေနဲ. နောက်တော်ပါးတွေပါ ။
ဗမာ ပြည်သူတွေ မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော. ခွဲခြား
. . . . ဗမာ ဗမာ နဲ.တော. အယူ မစောင်းပါနဲ.ဗျာ ။
sorryပါနော် Cthu ရေ ကျနော်နည်းနည်းလွန်သွားတယ်ဗျာ
sorry ပါကျတော် တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ